Misafidiana Tracker GPS azo antoka ho an'ny zanakao voan'ny Autism | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Mitady ny GPS Tracker tsara indrindra ho an'ny zanakao mahafinaritra anao ve ianao? Araka ny tatitra iray, hatramin'ny 49% amin'ny ankizy manana ASD dia miditra amin'ny elopement indray mandeha aorian'ny taona 4. Na izany aza, amin'ny toe-javatra toa izany, ny tracker GPS dia azo porofoina ho mpiara-miasa mahatoky ho an'ny zanakao sy ianao ary amin'ny fomba tsara indrindra hitandrovana tsara ny zanakao tsy ho salama. Saingy, raha ray aman-dreny manana zanaka manana filàna manokana ianao, dia hainao tsara fa tsy ny safidy rehetra dia azo natao ho anao. Tokony hisy tracker GPS ho an'ny zanakao manokana manana toetra mahafinaritra. Tsy mila miahiahy ianao, ary eto dia hampahafantarinay anao ny fomba hanaraha-maso ny zanakao ao an-trano ary rehefa any ivelan'ny trano ianao. Mampiasa ny rafitra GPS fanaraha-maso dia hahazo ny tatitra momba ny zanakao izay ataony. Mitaky fikarakarana manokana ny ankizy, ka noho ny maha ray aman-dreny anao no hikarakaranao ny zanakao amin'ny fomba rehetra azo atao mba hahazoana antoka ny fiarovana sy ny filaminany.
Tandremo ny ankizy
Raha te hanana hevitra tsara kokoa ianao hahita hoe aiza ny zanakao amin'ny fotoana voafetra sy ny toerana misy azy, dia mety mila mividy fitaovana GPS tracker ho an'ny zanakao ianao ary miala sasatra. Rehefa mivoaka eny an-tsena ianao dia hahita fitaovana fanaraha-maso GPS isan-karazany miaraka amin'ny endri-javatra niavaka, saingy inona avy ireo zava-dehibe tokony hotadidinao rehefa mifidy ny GPS tracker mety ho an'ny zanakao? Ato amin'ity lahatsoratra ity, aloha no horesahintsika hoe inona ny fitaovana fanaraha-maso GPS ary avy eo holazainao aminao ny fiasa sasantsasany mila dinihina rehefa mividy tracker GPS.
Inona ny rafitra GPS Tracking System sy ny fomba fiasa?
Global Positioning System dia fitaovana fitetezana entin'ny zavatra mihetsika, olona, ​​na entana izay mampiasa ny GPS hanarahana ny hetsika ary hamaritana ny toerana misy azy. Ho gaga ianao hahafantatra ny fomba maoderina ny rafitry ny GPS ankehitriny. Ny rafitra fanaraha-maso GPS dia tsy ampiasaina amin'ny fiara ihany, fa amin'ny tanjona hafa koa, toy ny fanarahana ny fahasalaman'ny be taona, ankizy, ao amin'ny birao hanaraha-maso ireo mpiasa, sy maro hafa. Ny tahirin-kevitra izay voarakitra amin'ny alàlan'ny fitaovana GPS dia azo tehirizina ao anatin'ny singa mpanara-maso na alefa amina fitaovana mifandray amin'ny Internet mampiasa ny haitao finday, ny onjam-peo na ny satelita maoderina tafiditra. Ity rafitra ity dia mamela ny toerana haseho amin'ny ambadiky ny sarintany na amin'ny fotoana tena izy na aoriana aorian'ny fisintomana, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanarahana GPS. Azo zahana amin'ny finday ny fampiharana fampiharana.
Inona no GPS Tracker ho an'ny ankizy?
Izy io dia fitaovana fanaraha-maso GPS izay mampiasa ny Global Positing Service hanara-maso ny hetsika sy ny toeran'ny zaza. GPS tracker dia rafitra satro-joro misy amin'ny navigateur eran-tany izay manolotra ny toeran'ny geo-toerana misy olona lasibatra amin'ilay mpandray GPS. Noho ny fanampian'ny fitaovana fanaraha-maso, na dia tsy afaka mifehy ny hetsiky ny zanakao aza ianao, dia ataovy azo antoka fa milamina izy ireo ary misy ny toerana misy azy ireo. Ny fitaovana GPS fanaraha-maso dia azo jerena amin'ny endrika isan-karazany toy ny famantaranandro, peratra, peratra, ary koa azo apetraka ao amin'ny kiraron'ny zanakao izany hanohizanao ny fanarahana ny toerana.
Fahamarinana ny rafitra fanaraha-maso GPS
Mahagaga fa tsy mampino sy marina tsara ny rafitra fanaraha-maso GPS raha any ivelany ny zanakao. Saingy, mbola afaka misy ny fitsabahana koa rehefa voasakana amin'ny tetezana, trano, na hazo ny famantarana. Matetika ny fitaovana fanaraha-maso GPS tsy misy fandraisana rehefa ao an-trano ny ankizy.
Safidio ny GPS Tracker tsara indrindra amin'ny zanakao
Nanangona lisitr'ireo endri-javatra malaza ho anao ianao mba handinihanao rehefa any an-tsena ianao hividy GPS tracker ho an'ny zanakao, ary ilay fitaovana fanaraha-maso mahatsiaro tsara anao.
Fomba fiantsoana roa lalana
Ity iray amin'ireo lafin-javatra malaza indrindra ilainao amin'ny tranga toy izany rehefa mieritreritra ny hanaraka ny zanakao ianao. Ny endri-javatra mahavariana dia mamela ny zanakao hametraka antso an-tariby ao amin'ny fitaovana iray rehefa takiana. Amin'ny maha ray aman-dreny anao na mpiambina anao, dia azonao atao koa ny mametraka fangatahana amin'ilay tracker amin'ny findainao amin'ny fotoana rehetra. Ity fomba ity dia ahafahan'ny roa tonta mifanaovan-droa fantatra amin'ny anarana hoe rafi-antso roa. Tsy tafiditra ao anatin'ireo fitaovana rehetra izy, noho izany dia lafin-javatra ilaina ilainao ny mandika ny fiarovana anao.
Samy mampiavaka ny rano fisotro sy mateza
Fantatrao tsara ny faharatsian'ny ankizy, ary azo antoka fa hainao tsara ny momba ny toe-kilalao nopotehin'izy ireo. Ka rehefa miezaka mividy fitaovana GPS fanaraha-maso ianao dia tsy maintsy manamarina ny faharetany. Mora mikapoka mora ny ankizy mpanara-maso ary ny ankizy kely dia tsy mahatsiaro ho mora saina na malefaka amin'ny fitaovana elektronika. Mba hikarakarana zaza kely dia mety hianjera, haharihary, averina any ivelany, ny fitaovana GPS, noho ireo antony manokana ireo, dia mila mandinika tracker mety maka trondro vitsivitsy ianao ary manohy mijery hatrany.
Inona no fanovana mifototra amin'ny toerana
Ray aman-dreny maro no maniry hahafantatra hoe aiza ny zanany, na an-tsekoly, na trano, na adiresy inona, satria tena ilaina ho fiarovana ny zanany izany. Sarotra ny mahita fitaovana iray izay hampahafantatra anao isaky ny miditra na miala amin'ny toerana manokana izy ireo. Tsy maintsy mikaroka endri-javatra momba ny fampahafantarana geofence, toy ny fomba hampahafantarina ny ray aman-dreny rehefa miditra na mivoaka ny zanany.
Soavan'ny famandrihana matetika
Tokony ho ianao dia ohatrinona ny handoavanao ary inona no hilalao rehefa mividy fitaovana GPS fanaraha-maso ny zanakao ianao. Ny ankamaroan'ny mpamatsy tolotra GPS fanaraha-maso dia mila vola isam-bolana hiasa, koa azo antoka fa mamaky ny vidin'ny isam-bolana
Momba ny Fiainana Batterie
Arakaraka ny ahitanao ilay fitaovana dia mitatitra ny toerana misy azy, ny herin'ny bateria bebe kokoa. Efa niaina io toe-javatra io niaraka tamin'ny fitaovana findainao fa rehefa mampiasa ny GPS ianao amin'ny fitrandrahana arabe mampiasa ny Google Map, ny batteran'ny telefaona isaky ny haingana. Ny haben'ny bateria na ny fiainana dia matetika mifanitsy amin'ny hoe hatraiza ny habetsaky ny fitaovana, koa tadidio ary mividiana tracker kely kely misy bateria tsara. Ity misy lisitry ny Fitaovana Tracking GPS tsara indrindra toy ny:
Fanaraha-maso momba ny fahasalamana amin'ny be taona
GPS Ankle manokana
Ankizy GPS Tracker Watch
Fikambanan-drano GPS azo entina rano ho an'ny ankizy
9463 Total Views 3 Views Today